CR7 ga-emepe ụlọ nkwari akụ ọhụrụ na Marrakech, Madrid na New York | Akụkọ Njem
CR7 ga-emepe ụlọ nkwari akụ ọhụrụ na Marrakech, Madrid na New York
Maria | | ulo, Noticias
Y’oburu na enwere egwuru-egwu buliri elu rue udiri ihe nke uwa na otutu nde ndi n’uwa niile, O bu boolu. Klọb na ndị ịgba bọọlụ na-akpali agụụ mmekọahụ ndị ahụ nke na ọ bụghị ihe ijuanya na ụlọ nkwari akụ ndị a raara nye eze nke egwuregwu emepere ọbụna.
Ọ dị mma, nwa oge ugbu a otu n'ime kpakpando nke European football, Cristiano Ronaldo, abanyela na omume a ma mepee ọtụtụ ụlọ oriri na ọ thatụ thatụ ndị nwere egwuregwu, ndụ dị mma na ọnụ ọgụgụ ya dị ka isi okwu.
Lisbon, Funchal, Madrid, New York na ugbu a Marrakech sonyere na ndepụta nke obodo ndị ụlọ nkwari akụ CR7 haziri. Olee otú onye ọ bụla n’ime ha dị?
6 Kedu ka ụlọ oriri na ọ CRụ CRụ CR7 dị?
Owuwu ulo oru nke ulo uka nke ise nke Cristiano Ronaldo amalitela ugbua ma hazie ntinye ya n’afọ 2019 n’aha Pestana CR7 Marrakech. O nwere ike ịbụ na ọ ga-agbaso otu usoro ahụ dị ka ụlọ nkwari akụ ya ndị ọzọ mana iji aka nke ụdị Moroccan, ebe ọ bụ na a maara nke ọma ndị na-agba ọsọ maka mba Africa.
Pestana CR7 Marrakech ga-adị n'okporo ụzọ M nke obodo ahụ, na otu n'ime ebe kachasịpụrụ anya na veranda nka, ụlọ ahịa okomoko, ụlọ oriri na ọ trendụyụ mara mma na ogige ndị mara mma.
Lọ nkwari akụ nke ndị ịgba ọsọ ụkwụ nwere n'uche maka Madrid ga-emepe ụzọ ya n'afọ a ma wụnye ya na Plaza Mayor. Ọnụ ego ga-adị gburugburu 200 euro kwa abalị ma ọ ga-enwe ụlọ 87, nke 12 ga-abụ ụlọ.
Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, echiche ahụ bụ maka ụlọ nkwari akụ mbụ CR7 ka a ga-emepe na Madrid, mana n'ihi nsogbu ụfọdụ nke obodo ukwu na igbu oge n'usoro ọchịchị, a ga-eyigharị oghere nke ntọala na isi obodo Spanish.
Pestana CR2018 New York na Pestana NY East Side na Pestana Newark na-eme atụmatụ imeghe na United States na 7., nke ga-agbakwunye karịa ụlọ ọhụrụ 380 na mba ahụ.
Ma ndị nọ na United States na Madrid ga-abụ ụlọ oriri na nkwari akụ n'okpuru nchịkọta Nchịkọta, nke a na-eche maka nanị ndị na-ege ntị nwere ụdị nke oge a na nke obodo mepere emepe.
Site na Pestana CR7 Lisboa Web Hotels na ọrụ nnabata ndị ọzọ anyị chọrọ iji weghachite Baixa site na mmebi emebi ya ma mee ka ọ dị ụwa.
Ọ bụ ụlọ nkwari akụ mara mma nke nwere ọnụ ụlọ iri asatọ na ime ụlọ na-adị mma na obi obodo ahụ, mita ole na ole site na Praça do Comércio nke ihe atụ. Mma nke ime ụlọ ndị ahụ na-arụ ọrụ ma pere mpe mana ntụaka maka egwuregwu na-aga n'ihu. Ọ bụghị naanị site na ọnụ ọgụgụ zuru ụwa ọnụ nke Cristiano Ronaldo kamakwa site na ọnụnọ nke akwụkwọ ozi vintage agbachitere na oriri na nkwari akụ, football football na oghere ma ọ bụ nnukwu ákwà na ụlọ mmanya ka ị ghara ịhapụ egwuregwu.
Na mgbakwunye, Pestana CR7 Lisboa Hotels Hotels nwere usoro akpaaka ụlọ nke na-enye gị ohere ijikwa ọkụ ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ nke ụlọ ahụ site na ngwaọrụ dijitalụ ọ bụla, họrọ egwu ma ọ bụ gbanwee mmemme telivishọn.
Na nkwari akụ nke na-akwalite ndụ ahụike, ị gaghị echefu mgbatị ahụ ebe ndị ahịa nwere ike na-emega ahụ ma na-emeziwanye ahụike ha. ekele maka nlebara anya nke onwe nke ụlọ nkwari akụ ahụ nwere mmemme mmega ahụ kwesịrị ekwesị maka onye ọ bụla.
Aha ya bụ Pestana CR7 Funchal ma ọ dị na isi obodo Madeira na ụlọ na-acha uhie uhie na-eche ihu n'oké osimiri nke nwere ọdọ mmiri, spa, ohere ịnweta CR7 Museum nke Funchal na ohere nke iji usoro ọzụzụ pụrụ iche na mgbatị ahụ dị n'èzí nke ndị egwuregwu ji aka ya mepụtara.
N'ime Pestana CR7 Funchal, e nwere ụzọ atọ nke ime ụlọ na-ejikọ imewe nke oge a na nke egwuregwu. Ha nwere ụdị nkasi obi dị iche iche, a na-ekpuchi ụda ma na-enweta site na ntanetị site na paseeji ahịhịa na-amị amị nke egwuregwu egwuregwu bọọlụ. On ọ bụla ụzọ e nwere otu nnukwu foto nke Ronaldo na bedrooms e nwere ihe osise nke ndụ ya.
Ọzọkwa, ndị ahịa nwekwara ohere ịbanye na mbara ụlọ nke ụlọ nkwari akụ ahụ, nke na-enye echiche dị egwu nke Funchal, ọnụ mmiri ya na marina.
Kedu ka ụlọ oriri na ọ CRụ CRụ CR7 dị?
Hotelslọ oriri na ọ7ụ CRụ CRXNUMX bụ nsonaazụ nke njikọta n'etiti Portuguese kpakpando na Pestana Hotels & Resorts Group, bụ onye na-ahụ maka njikwa ọrụ nke ihe ndị ahụ. Onye ahịa profaịlụ nke ụlọ oriri na ọ Cristianoụ Cristianoụ Cristiano Ronaldo bụ ndị na-eto eto nọ n’agbata afọ 18 na 35 bụ ndị nwere mmasị na teknụzụ, ndụ dị mma na ndụ mmekọrịta.
Ahịa dị n'etiti 250 na 1.250 euro kwa abalị dabere na ụlọ ahụ. Ha nwere ike ịdị ka ọnụ ahịa dị oke ọnụ mana mana ndị a bụ ụlọ nkwari akụ 5 nwere ọtụtụ ụdị ntụsara ahụ na teknụzụ kachasị ọhụrụ. Agbanyeghị, enwere ndị nwere obi abụọ na enwere ọtụtụ ndị na-eto eto nwere ike ị nweta ọnụahịa ndị a mgbe ha na-ahọrọkarị maka njem nleta dị ọnụ ala.
Agbanyeghị, ika a na-ezube ịbawanye ọnụ ọgụgụ ụlọ oriri na nkwari n'ime afọ ise. A nụrụ asịrị na-esote oghere ịnọ na Milan na Ibiza yana Asia na Middle East maka na Cristiano Ronaldo bụ onye ama ama ebe ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » ulo » CR7 ga-emepe ụlọ nkwari akụ ọhụrụ na Marrakech, Madrid na New York
Caral, njem nleta ihe ochie na Peru
Ebe 12 aga-ezere na 2018 dị ka CNN si kwuo